Semalt ကျွမ်းကျင်သူ: အရည်အသွေးမြင့်မားသောအကြောင်းအရာများ!
Semalt ကျွမ်းကျင်သူ - အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာအကြောင်းအရာများ!
သင်ဟာမိုတယ်တစ်လုံးထဲဝင်ဖူးသလား။ ဒုတိယအကြိမ်ပြိုကျတော့မည့်ပုံပေါ်သောကြောင့်သင်ထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ သင်၏အကြောင်းအရာသည်သင်၏ visitors ည့်သည်များအပေါ်မည်မျှသြဇာညောင်းနိုင်သည်ကို၎င်း၊ သင်အရည်အသွေးသည်အိမ်ငှားတစ် ဦး အနေနှင့်မလုံလောက်ဟုသင်ခံစားမိသောကြောင့်သို့မဟုတ်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြားမိုတယ်မိုတယ်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာအရည်အသွေးသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နည်းတူဖြစ်သည်။
"အရည်အသွေးကိစ္စရပ်များ" ဒီမှာ Semalt ။ ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဆိုတာယုံကြည်တယ်၊ မင်းမှာအကောင်းဆုံးရှိဖို့လိုတယ် ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အခြားသူများကြားတွင်ထူးခြားနေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုပေးသည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်ဖတ်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ site ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးသင်တွေ့သမျှအကြောင်းအရာတိုင်းကသင့်ကိုနှောက်ယှက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမခံသည်။
ယခုသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြီးဆုံးပါကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအပြည့်အ ၀ အံ့အားသင့်စွာဖြင့်သင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုသွားနေသောကလစ်အားလုံးနှင့်သင်သွားလိမ့်မည်၊ သင်၏အလိုအလျောက်ဖြစ်လာသည်။ အားလုံးအရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရသာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဤမျှအံ့သြစရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသာမကပြန့်နှံ့စေသည်။ သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပြီး၊ ဖြစ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းအောင်ပါ ၀ င်တယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအကြီးအကျယ်အရှိန်မြှင့်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းပါသည်။
ယနေ့တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တီထွင်သူများသည် SEO နှင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသည်ကိုသတိပြုမိကြသည်။ ။ ဤအရာကိုသင်နားလည်လိုက်သည်နှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားနိုင်သည့်အရေးကြီးသောနေရာများကိုသင်စတင်မြင်တွေ့ရတော့သည်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလျှင်, အရည်အသွေးပြည့်ဝသောဝဘ်ဆိုက်မပါဘဲထိရောက်သော SEO ရှာဖွေမှုကိုပြုလုပ်ပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ရန်သင့်အား SEO ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ပထမစာမျက်နှာများတွင်တင်ရန်သင်၏ SEO လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သင်၏စာဖတ်သူများအားသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖြတ်သန်းသွားစေရန်သို့မဟုတ်ကြာကြာနေရန်အရည်အသွေးမြင့်သောအကြောင်းအရာများလိုအပ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်သည့်အခါဂူဂဲလ်ကဲ့သို့သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်များဖြစ်သည်။
SEO နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အကြောင်းအရာသည် KING ဖြစ်သည်။
မတ်လ 2016 ခုနှစ်တွင် Google ကစံချိန်တင်ခဲ့သည် အရေးကြီးဆုံးရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အချက်အလက်များမှာအရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများ၊ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် Semalt အလုပ်လုပ်ရန်မည်မျှလိုအပ်သည်ကို၎င်းကပြသည်။ သင်အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ သင်၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များသည်ပြည့်စုံနေ ဦး မည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ဤအခွင့်အရေးကိုရယူရန်နှင့်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုတွင်အဆင့်အတန်းရရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်လိုအပ်သည်။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။
၎င်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်၏အရည်အသွေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအရာများကိုကြည့်ရှုမည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည်ယနေ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များဖြစ်ရာကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိလိုကြသည်။ ဂူးဂဲလ်သည်အကြောင်းအရာအရည်အသွေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာများကိုဖွံ့ဖြိုးရန်ကြိုးစားသည့်အခါဝက်ဘ်အကြောင်းအရာရေးသားသူများ၊ ဝဘ်တီထွင်သူများနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များသည်အဘယ်အရာကိုဂရုပြုသင့်ကြောင်းရှင်းပြသည်။
စိတ် ၀ င်စားစရာအချက်မှာဂူဂဲလ်သည်၎င်း၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် algorithm ကိုတစ်နှစ်လျှင်ကြိမ်ဖန်များစွာပြုပြင်သည်။ သို့သော်စာမျက်နှာကိုအကဲဖြတ်သည့်အခါ၎င်းသည်လူသားရှာဖွေမှုအရည်အသွေးစစ်ဆေးသူများကိုအသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။
သင်ဟာဂူးဂဲလ်ရဲ့အရည်အသွေးပါ ၀ င်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလေ့လာဖို့စဉ်းစားနေပါသလား။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမအချက်အနေဖြင့်၎င်းသည်သင့်ကိုမွေးဖွားစေမည့်အရာများစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤဗဟုသုတကို ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုတည်းပေါ်တွင်သာအသုံးပြုပါကမလွယ်ကူပါ။ ဒုတိယအချက်မှာသင်၌ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်။ Semalt သည်၎င်း၏တည်ရှိမှုတစ်ခုလုံးကိုဤလမ်းညွှန်ချက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ပုံတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုငှားရမ်းခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်ဤအလုပ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သိမ်းဆည်းပြီးသင်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အခြားအရေးကြီးသောကဏ္onများကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်ချောသောလျှောစောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ။ အချို့က၎င်းကိုသင်၏အကြောင်းအရာကို၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန်စွမ်းရည်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအချို့ကသင့်စာဖတ်သူများကိုစာဖတ်သူများကိုကူညီသည့်အခါသင်၏အကြောင်းအရာကိုအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဂူဂဲလ်မှခွဲထုတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောသဲလွန်စများဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာများကိုအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးအဖြစ်သတ်မှတ်ရာတွင်ဂူဂဲလ်ကဝက်ဘ်ဆိုက်အားမည်သူကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုအပ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အကြောင်းအရာကိုမည်သူဖန်တီးသနည်း။ ဒီဆောင်းပါးကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်ယူပါ။ ပထမစာပိုဒ်အရ၊ ဤအကြောင်းအရာသည်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်ကိုသိရန်လိုအပ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအတွက်ရည်ရွယ်သည်မှာရှင်းပါသည်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကို Semalt ကပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။
သင်၏အကြောင်းအရာသည်အရည်အသွေးမြင့်ရန်စာဖတ်သူနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရမည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်၎င်းတို့ကိုထားရှိခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏စာဖတ်သူများအားစာမျက်နှာတစ်ခုစီ၌သူတို့ရရှိလိမ့်မည်ဟုသင်ပြောခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူစေချင်ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်၏စာဖတ်သူများသည်သင်၏ပါဝင်မှုကိုကျေနပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုထိပ်တန်းအရည်အသွေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရရန်စာဖတ်သူများသည်၎င်းကိုထိပ်တန်းအရည်အသွေးအဖြစ်ရှုမြင်ရမည်။
သင့်စာဖတ်သူများသည်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ်မေးခွန်းများဖြေရန်သင်၏စာမျက်နှာသည်စာဖတ်သူများအားကူညီပါသလား။ အကယ်၍ ၎င်းကိုလုပ်နိုင်လျှင်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီ။
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အရည်အသွေးကိုရရှိခြင်းသည်သင်အလွန်ပျော်ရွှင်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ သင့်အနေဖြင့်ဝဘ်စာမျက်နှာအမျိုးမျိုးရှိကြောင်းကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုချင်းစီ၏အရည်အသွေးကိုကွဲပြားစေသည်။ ဤသည်မှာ Semalt သည်သင့်အတွက်ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ပိုကောင်းသည့်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်၏ငွေနှင့်သင်၏စာမျက်နှာကိစ္စဖြစ်သည်။ Semalt မှထောက်ပံ့ပေးသောစျေးနှုန်းချိုသာသော packages များနှင့်အတူ၎င်းသည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
< h3> အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများရရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဒီမှာတွေ့နိုင်သည်။
အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများသည် CTR ကိုထုတ်ပေးသည်။
CTR ဆိုတာဘာလဲ? ဒီမှာဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ သို့သော်ရှင်းလင်းချက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဒီလေ့လာမှုကွင်းဆက်ကိုငါတို့ချိုးဖျက်မှာမဟုတ်ဘူး။ CTR သည် Click-through နှုန်းကိုဆိုလိုသည်။ ဤသည်မှာကြော်ငြာများ၊ အတိုအထွာများသို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာများကိုတွေ့ပြီးနောက်သင်၏ link ကိုနှိပ်သူလူအရေအတွက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
သင်၏ CTR သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအသုံးပြုသောအဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အရည်အသွေးရမှတ်ဆုံးဖြတ်ရန်။ သင်၏ CTR နှင့် SEO အသုံးပြုမှုသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အဆင့်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာကောင်းသော CTR သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက် (အသွားအလာ) ကိုပိုမိုသောနှိပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်၊ ဝဘ်ဆိုက်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပေါ်တွင်သင်၏ကိန်းဂဏန်းများကိုပိုမိုနှိပ်လိုက်ပါကနှိပ်လိုက်ပါ။
သင့်အကြောင်းအရာများအားညံ့ဖျင်းစွာတည်ဆောက်ခြင်းမရှိပါကဤအရာသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ SEO ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ဝက်ဘ်ရှာဖွေသူများ၏စွမ်းရည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏စာဖတ်သူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
အရည်အသွေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသည်သင် backlinks များထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်။
backlinks ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ အကောင်းဆုံး SEO နည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုမှာအရည်အသွေးမြင့် backlink များကိုတတ်နိုင်သမျှများများထားရန်ဖြစ်သည်။ Backlinks သည် website တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားရှိ link ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤအချက်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်အများစုကအသုံးပြုပြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိသောနေရာများဖြစ်သော၎င်း၏စာဖတ်သူများကိုအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုအင်တာနက်ကိုးကားမှုပုံစံတစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားပါ။
အရည်အသွေးမြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အရည်အသွေးကောင်း backlink များထားရှိခြင်းသည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်သို့ပိုမိုသွားလာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်အတွက်အဆင့်မြင့်အခွင့်အာဏာရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အရည်အသွေးမြင့်သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ အထက်တန်းကျောင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်များပုံစံကိုအဖြေများကူးရေးသောအတန်းဖော်အချို့ရှိခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကသူတို့အဖြေကိုယုံကြည်လို့ပဲ။ အခြား ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုနောက်ပြန်ချိတ်ဆက်သည့်နည်းတူသင်ပေးရမည့်အကြောင်းအရာကိုသူတို့ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားအောင်ဂူဂဲလ်အားနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အားလုံးအရည်အသွေးကို content တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သင်စပြီးရေးသားသောအခါသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းဆွဲသောအခါ၊ သော့ချက်စာလုံးတစ်လုံးကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဝါကျတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းသင်သဘောပေါက်သည်။ သို့သော်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏စာဖတ်သူများအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောနည်းလမ်းဖြင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ထိပ်တိုက်သွားလျှင်ဤအချက်သည်သင့်အားပိုမိုအားကောင်းစေသည်။
အရည်အသွေးအကြောင်းအရာကအသုံးပြုသူများသည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေစေသည်။ အရည်အသွေးအကြောင်းအရာဆိုသည်မှာကောင်းမွန်သောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာကိုဆိုလိုသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင့်၏အရည်အသွေးနှင့်ပြည့်စုံသောဂရမ်များ၊ သင့်၏စက်ရုပ် txt ဖိုင်များ၊ စာဖတ်သူများသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရန်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေလိမ့်မည်။
စာမျက်နှာတိုင်းတွင်စနစ်တကျတံဆိပ်ကပ်ထားသောစာမျက်နှာများနှင့်စာတန်းထိုးများကြောင့် Vis ည့်သည်များသည်ဝါကျတစ်ခုချင်းစီကိုဖတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
Semalt ကသင်၏ visitors ည့်သည်များသည်အထူးစိတ်ဝင်စားရန်၊ အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်ကုသလိုကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သည် champs များကဲ့သို့ခံစားရရန်သေချာစေရန်နည်းတစ်နည်းမှာအရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့အချိန်ခံထိုက်သော။
အဓိကအားဖြင့်အရည်အသွေးရှိသော SEO နှင့်အရည်အသွေးပါ ၀ င်မှုများသည်အတူတကွအလုပ်လုပ်သည်။ Semalt ကကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့်၎င်းဒြပ်စင်နှစ်ခုလုံးသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမှီခိုနေသည်ကိုနားလည်သည်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့ဝဘ်ဆိုက်အဆင့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ နှစ်ခုလုံးကိုအတူတူအားဖြည့်ဖို့လိုတယ်။ Semalt ကိုဤသို့လုပ်နိုင်လျှင်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသည်ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများတွင်ပထမဆုံးဖြစ်လာလိမ့်မည်။